Ra’iisul Wasaare Saacid oo mar kale ku celiyay mowqifka dowladda ka istaagtay shirka Kismaayo – idalenews.com
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa mar kale ku celiyay mowqifka dowladda ka taagan tahay shirka ka socda Kismaayo, kaasoo shalay lagu ansixiyay Axdi KMG ah oo uu yeelanayo maamulka Jubbaland.
Isagoo xalay ka qeyb galayay Barnaamij si toos ah su’aalo lagu weydiinayay oo ka baxayay Radio Muqdisho ayuu sheegay in si cad ah ay u sheegeen waxa ay ka qabaan shirka ka socda Jaamacada Kismaayo, isla markaana aan la waafajin dastuurka.
“Shirka ballaaran ee ka socda Jaamacada Kismaayo wax aan ka qabno oo cad baan horay u sheegnay, hadaad dib u eegtid, waxa aan ka qabno horay ayaa u qeexnay, hada ka hor dowladda mowqifk cad bey iska taagtay”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Saacid.
Mr Saacid ayaa sheegay inay shirka Kismaayo markii hore ka soo jeediyeen in marka hore dastuurka la waafajiyo, kadibna laga dhigo labo weji oo kala ah in dib u heshiisiin la qabto iyo in la sameeyo maamul.
“Waxaa shirka Kismaayo ka soo jeedinay, maadaama shaqo badan gashay in la waafajiyo dastuurka dalka, dowladda ay hogaanka qaadato, labo weji in laga dhigo baa ku tala galnay, weji dib u heshiisiin ah iyo wajiga dambe oo maamul u sameyn noqon karta”ayuu yiri Saacid.
Ra’iisul Wasaare Saacid ayaa sheegay in markii tageen Kismaayo, isla markaana ay isku mari waayeen wada hadalada ay ka codsadeen Maamulka Kismaayo inay muddo saddex cisho siiyaan, balse ay dhankooda siiyeen 20-cisho si ay uga soo fikiraan, balse saddex cisho aan wax fudud aheyn, maadaama hal maalin 22-sano oo dalka colaad iyo dagaalo ka soo jiray taladiisa lagu xalin karin.
Inkastoo dowladda ku adkeysaneyso mowqifkeeda ku aadan shirweynaha Kismaayo, hadana waxaa shirka uu u muuqda mid weji cusub galay, isla markaana ay dhow dahay natiijada iyo go’aan gaarista, iyadoo maamulayaasha Kismaayo u muuqdaan kuwo dowladda la’aanteeda wax qabsan karaan.
Si kastaba ha ahaatee shirweynaha Kismaayo ee maamul u sameynta Jubbaland ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ka soo baxaan natiijo ay adag tahay sida dowladda Soomaaliya u aqbali doonto, una aqoonsan doonto maamul ka soo baxa shirkaas.
Cumar Cabdirashiid “Waxaa heysataan fursad muhiim ah oo aad ku dhisan kartaan Maamulka Jubbaland”